Solid-State Fermentation Bioreactors - China Solid-State Fermentation Bioreactors Supplier,Factory –KNIK BIO
Solid state Fermentation [SSF] ichangobva kutariswa seinodhura zvakanyanya uye yakawedzera nharaunda inoshamwaridzana kune yakadzika mvura Fermentation [SLF] mukugadzira kukosha kwakawedzerwa maindasitiri akavakirwa zvigadzirwa akadai maemymes, bio mafuta pamwe nezvinodiwa. Kukodzera uye kudiwa kweSSF uye SLF kwakafupikiswa. Hutachiona hutachiona hukuru hwakabata chinzvimbo chakakosha mukuwana mhedzisiro yeSSF maitiro akaiswa pachena. Iyo yakajairika maitiro uye maitiro ekugadzira eakasarudzwa bioreactor akagadziriswa mukati mefungwa yeSSF. Kushandiswa kwemaitiro muzvikamu zvakasiyana zveupfumi sekusimudzirwa kwemaindasitiri, indasitiri yezvikafu zvevechidiki pamwe nekutonga kwenzvimbo zvakataurwa. Ongororo iyi yaive nechinangwa chekuunganidza mabhuku ekuparadzira nzvimbo iripo yeunyanzvi paSFF, zvakanakira nezvisina kunaka zvinoenderana neSLF uye nemashandisi avo akasiyana.